Okporo ụzọ Marking Glass Beads Manufacturers - China Road Marking Glass Beads Factory, Suppliers
Igwe bekee bụ akụkụ dị mkpa nke usoro nchekwa okporo ụzọ. Kama ịgbasa ọkụ, a na-enyogharị ọkụ na chaplet, na-enye ya ohere igosipụta ya site n'okporo ụzọ na-egosi akara azụ na onye ọkwọ ụgbọ ala.
Ngwongwo iko a na-atụgharị uche nwere ike imeziwanye ihe ochie nke akara akara okporo ụzọ. Na-akwọ ụgbọala n'abalị, ọkụ ihu na-enwu n'okporo ụzọ akara akara na iko chaplet, ìhè ọkụ ọkụ na-egosipụta azụ n'ụzọ kwekọrọ ekwekọ. ya mere onye ọkwọ ụgbọ ahụ nwere ike ịhụ ụzọ dị n'ihu n'ụzọ doro anya, ma na-anya ụgbọala n'enweghị nsogbu n'abalị.
Akwadoro Glass Beads maka Road Marking
Enwere ike ịme mkpuchi site na 50um-1180um, dabere na ihe ndị ahịa chọrọ.
N'ihi ọnụnọ iko iko n'elu ya nke na-egosipụta ọkụ nke ụgbọ ala, ọgba tum tum na ịnyịnya ígwè, a na-eji ụzọ chara acha na-eduzi ndị ọrụ okporo ụzọ n'ọchịchịrị. Mgbe ole ......
Mpempe Mpempe 1.7nd maka akara okporo ụzọ
1.7nd Reflective glass beads can ukwuu melite ochie-echiche onwunwe nke ụzọ marking akara. Na-akwọ ụgbọala n'abalị, ọkụ ihu na-enwu n'okporo ụzọ akara akara na iko chaplet, ìhè ọkụ ọkụ na-egosipụta azụ n'ụzọ kwekọrọ ekwekọ. ya mere onye ọkwọ ụgbọ ahụ nwere ike ịhụ ụzọ dị n'ihu n'ụzọ doro anya, ma na-anya ụgbọala n'enweghị nsogbu n'abalị.